बेला हदीद र द हप्ता फेरी 'ह्या hanging आउट गर्दै' छ - समाचार
मुख्य मनोरञ्जन सेलेब्स समाचार ब्लग
बेला हदीद र द हप्ता फेरी 'ह्या hanging आउट गर्दै' छ
यदि सुरुमा तपाईं सफल हुनुहुन्न भने, प्रयास गर्नुहोस्, फेरि प्रयास गर्नुहोस्! हप्ता र बेला हदीद फेरि 'ह्या hanging्गआउट' मा फर्किएका छन्, एक नयाँ रिपोर्ट भन्छ।
ओलिभिया मन्न र जोर्डन रडजर्स
यो जोडी गत नोभेम्बरमा डेढ बर्ष पछि विभाजित भयो। यो वास्तवमै उनीहरूको थियो दोस्रो विभाजन ।
नयाँ रिपोर्ट द्वारा E! समाचार ती दुबै बीच अझै पनि भावनाहरु छन् भनेर भन्छन्। वास्तवमा, रेपर (वास्तविक नाम हाबेल टेस्फे) नोभेम्बर १ 14 मा बेलाको न्यू योर्क शहरको अपार्टमेन्ट छोडेको फोटो खिचेको थियो, केही हप्ता पछि उनको विभाजनबाट हटाइयो सेलेना गोमेज ।
एक स्रोतले भन्छ, 'बेला र हाबिल हाबिल र सेलेना बिभाजित भएदेखि सम्पर्कमा थिए, तर तिनीहरू एकसाथ भेला भएका छैनन्।' 'हाबिल बेलामा नजिकै आइपुगे र बाहिर निस्किने भनेर समातिए, र उनले उनलाई हेर्ने र के हुन्छ हेर्ने निर्णय गरे। उनीलाई थाँहा छ कि यदि उनीहरू फेरि डेटि don't गर्दैनन् भने उनीहरू कम्तिमा राम्रो साथी बन्न सक्छन्। '
यस्तो देखिन्छ कि तिनीहरू केवल राम्रा साथीहरू भन्दा बढी छन्।
'उनीहरू एक अर्काको कम्पनीमा रमाईलो गर्छन् र सँगै धेरै रमाइलो गर्छन्,' स्रोतले भने, उनीहरूसँग 'आश्चर्यजनक सम्बन्ध छ।'
अलेक्ज्याण्डर / WENN.com
दोस्रो स्रोतले ती भावनाहरूलाई प्रतिध्वानित गर्यो।
'उनले उनीहरुलाई भने कि उनी अझै पनि उनलाई माया गर्छिन्, र उनीहरुसँग सँधै साँचो सम्बन्ध रहनेछ, 'स्रोतले भने। 'उनले विगतमा उनलाई चोट पुर्‍याएकोमा माफी मागे।'
बेलाको लागि, उनले ढिलो लिईरहेकी छन् र चिप्स कहाँ पर्दछन् भनेर।
'उनी अझै उसलाई माया गर्छिन् तर उनको गार्ड अप छ। उनी वास्तवमै उनीमाथि कहिल्यै पसेनन्, 'दोस्रो स्रोतले भन्यो। 'उनी अहिले उनीसँग एक मात्र हुन सकेकी छैनन्, बस उनका साथी बन्न। उसको तालिकाले उनलाई उनीमा केन्द्रित रहन दिँदैन — विगतको अनुभवबाट उसलाई यो थाहा छ। उनी जान्दछन् कि उनी अझै केटीहरूसँग कुरा गर्दैछन्। उनी समाचारमा राखिएका कुरा पढ्छिन् र त्यसले उनलाई असर गर्छ। '
अझै पनि, उनी भिन्न व्यक्तित्व हुन्, यस पटकको लागि राम्रोको लागि, त्यसैले अider्कितकर्ताले सोच्छ कि त्यसले मद्दत गर्न सक्छ।
'उनी यस पल्ट अझ राम्ररी छिन्,' भित्रलीले थप्छिन्। 'ऊ हाबिललाई फेरि कोशिस गर्छिन्, हुनसक्छ सडकबाट तल झरेकी छिन्, तर सम्बन्धमा छिर्नु भन्दा पहिले साना कदमहरू चालिरहेकी छे।'
पहिलो बच्चाको साथ गर्भवती एशले टिस्डाले - उनको घोषणा हेर्नुहोस्
निकी मिनाज प्रकट गर्छिन् कि उनी विवाह गरिन्
किम कार्दशियनले सम्बन्ध विच्छेदको लागि दायर गर्‍यो
कहाँ राहेल रे फिल्माइएको छ
मारिया क्यारी सगाई रिंग मूल्य
एलेन भनेको के हो जन्मदिन जन्मदिन